Ndingaita sei kuti ndiongorore ikozvino SEO score?
Ndiri kugara ndichinzwa mibvunzo pamusoro pekuedza kufambira mberi ikozvino kana kuverenga webhusaiti SEO chikoro pachako. Asi ivo vari kunyanya kufunga here? Kutaura pachena, ini handizivi kana pane chimwe chinhu chakanaka, kana kuti chakaipa SEO score shure kwezvose. Ichokwadi, pfungwa yekutsvaga injini yekugadzirisa inonyanya kukosha, uye yakawanda yezvinhu zvose zvekushandisa nzira inoda kunzwisisa zvakajeka kuendesa iwe webhusaiti yako nzira yekubudirira chaiyo muInternet ranking. Zvakanaka, zvinoratidzika sekupindura mubvunzo pamusoro peSeO score measurement inenge isinganzwisisiki. Zvechokwadi, hapana dashboard yakagoverwa yakagadzirwa nemichina yekutsvaga kuti tifananidze mapeji ewebsite yega yega kune zvimwe zvakakosha kumabhizimusi, kana zvimwe imwe niche yemakethe yakafanana. Uye hapana maitiro ekushanda kana masangano ekubatanidza kuita shanduro yakafanana kwavari yose: hukama, humwe zviratidzo zvehupfumi, hukuru hunyanzvi hwezvinhu zve SEO, nhamba yepamusoro pepamusoro mapepa, peji yekusimudzira kasi, kusataura ma tags akasiyana uye iyo yehutano quality pachayo. Saka nderudzii rwemhinduro ratingagona kuwana? Ngatiedzei kuona kuti tingaita sei ne SEO mapeji echokwadi.
Tinokwanisa kuenzanisa zvinhu zvinokosha zvewebsite yako SEO kunopikisana nevadzidzi vako vari pedyo.
Kutaura pamusoro pezvinyorwa zvitsva, ndinoratidzira kuenzanisa kweiyo webhusaiti inoenderana nedzimwe nhamba dzevadzivisi venyu. Isu tinogona kudzidza maitiro avo aripo anobva kune chinangwa chemashoko mukati memabhizimisi mamwechete, uyewo vatengi vemusika vachishandisa mazwi aya akaoma pavanotsvaka zvigadzirwa kana mabasa. Kuita izvi nenzira iyi, iwe uchakwanisa kuona kana iwe uri kufamba nenzira yakarurama, kana iwe ungangodaro unoda kugovera nyanzvi yekugadzirisa nokukurumidza. Ndinoreva pano kuti kuwana SEO yako inoshanda kunze kune dzimwe nguva ingave yakanyatsogadzirwa, kwete kutaura chete chisarudzo chokurarama.
Tinogona kudzidza zvakanakisisa mukana wevadzivisi venyu uye unonzwa wakasununguka kuzviita.
Ndinotenda kuti kucherechedza zvimwe zvakajeka zvouchapupu pamakwikwi ako ekukwikwidza uye kushandiswa kwekubudirira kwaanoita kunowanzove yakananga uye yakajeka sarudzo yekuvandudza seO score yako. Zvisinei, ini handirevi pano kuita se copycat. Kungotarisa pane zvinhu zvinobudirira uye kutanga kuvamutsira muupenyu pamapeji ako ewebhu. Chimbofungidzira, muvengi wako ane simba ari kuwana zvikomborero zvakanaka kune vamwe vanozivikanwa zvemashoko evanhu. Saka sei usingafambidzana nekutsvaga SEO mapurogiramu pamwe chete nezvinhu-zvakaratidzwa, zvakadai sekuda, kutaura, uye zvikamu pa Facebook, somuenzaniso?
Tinogona kuona izvo vavengi venyu vari kuita nenzira isina kururama.
Kufanana nekubatanidzwa mune imwe hondo ipi zvayo yokukwikwidzana, inogona kuva pfungwa yakanaka chaizvo kukunda mutsara nekuziva kushaya simba kwemuvengi wako. Uye urongwa uhwu hunonzwisisika kunyanya kana huchishandiswa kuchenesa ikozvino SEO score. Saka, usanonoka kushandisa zvakanaka chero chinhu chipi zvacho chakakanganiswa nevashori vako - kana iine maitiro avo ehupenyu kana chimwe chezvinhu zve Search Engine Optimization ivo vachiri kusashandisa zvizere Source .